के हेर्नको लागि Sanlúcar de Barrameda | यात्रा समाचार
लोला करील | | España, सामान्य, समुद्र तटहरू, के हेर्ने
सान्लाकार डि बरमेडा, डोआना नेशनल पार्कको अगाडि अवस्थित, यो काडिज तटमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको शहरहरू मध्ये एक हो। प्रागैतिहासिक कालदेखि नै कब्जा गरिएको छ र यसको रणनीतिक स्थितिको लागि धन्यवाद, यो टार्टेसोसले बसोबास गरेको थियो, यो स्पेनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मेदिना सिडोनियाको भव्य घरको स्थापनास्थल थियो, र यो निर्यातको मुख्य कुराको रूपमा स्थापित भएको थियो। अमेरिकाको उपनिवेशको समयमा सामानहरूको। आज, यसको सडकहरूले इतिहासको ती शताब्दीहरूलाई राख्छ र प्रतिबिम्बित गर्दछ.
Sanlúcar de Barrameda को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाले छुट्टीमा भ्रमण गर्न यसलाई एक आदर्श गन्तव्य बनाउँदछ। समुद्री तट, स्मारक, रात्रि जीवन र बारहरू राम्रोसँग खानको लागि यसमा सबै आवश्यक सामग्रीहरू हुन्छन् ताकि तपाईं थाँहा लिन सक्नुहुन्न। यदि तपाइँ Sanlúcar de Barrameda मा के हेर्ने र के गर्ने थाहा छैन भने, तपाइँले यस पोष्टलाई याद गर्न सक्नुहुन्न जहाँ तपाइँले एउटा भेट्टाउनुहुनेछ टूरिस्ट रुचिको स्थानहरूको साथ सूची दिनुहोस् जुन तपाईंको गहनाको भ्रमणमा आवश्यक हुनेछ Cádiz.
1 बारियो अल्टो भ्रमण गर्नुहोस्
1.1 लास कोवाचस
1.2 ला मर्सेडको अडिटोरियम
1.3 चैरिटी अवर लेडीको बेसिलिका
1.5 ओ पेरिस को हाम्रो महिला
1.6 मेदिना सिडोनिया प्यालेस
1.7 अर्लिन्स-बोर्बन प्यालेस
1.8 स्यान्टियागोको महल
2 Sanlúcar de Barrameda मा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटहरू
2.1 Bonanza बीच
2.2 ला Calzada र लस Pilatas को तटहरू
3 प्लाजा डेल क्याबिल्डो
4 Bonanza बजार
5 Sanlúcar बाट डोआना नेशनल पार्क भ्रमण गर्नुहोस्
6 Sanlúcar मा फ्लेमेन्को
6.1 Sanlúcar de Barrameda मा म flamanco शो कहाँ देख्न सक्छु?
6.1.1 स्थिर जीवन गर्न को लागी
6.1.2 फ्लेमेन्को क्लब प्यूर्टो लुसेरो
6.1.3 Rociera एल रेन्गु कोठा
7 Sanlúcar वाइनरीहरू
7.1 केहि वाइनरीहरू जसले उनीहरूको सुविधाहरूमा भ्रमणहरू व्यवस्थित गर्छन्
7.1.1 बोडेगास हिडाल्गो ला गिताना
7.1.2 बोडेगास ला सिगारारेरा
7.1.3 बोडेगास बार्बाडिलो
8 कहाँ Sanlúcar डे Barrameda मा खानु
8.1 कासा बिगोटे भोजनालय
8.2 बार कासा बालबिनो
8.3 बेटिक कुना
बारियो अल्टो भ्रमण गर्नुहोस्
ब्यारियो आल्टो डे सानलकर शहरको सब भन्दा पुरानो भाग हो, मध्य युगमा यसले सबै गतिविधिहरू केन्द्रित गर्‍यो र भित्ताले सुरक्षित गरेको थियो। यसको सडकहरूमा हिंड्नु विगतको लागि सही यात्रा हो र समुद्री किनारको शहरको महत्त्वको बारेमा वाणिज्यको रणनीतिक बिन्दुको बारेमा जान्ने ठूलो अवसर हो।
धार्मिक भवनहरु, बगैंचाहरु, वाइनरीहरु र दरबारहरु, प्रत्येक कुनामा एक कहानी छ। अर्को, म तपाईंलाई बैरो अल्टोबाट पैदल यात्रामा तपाईंले के रुक्नुपर्दछ देखाउँदछु।
कुएस्टा डे बेलनमा अवस्थित, पालासियो डे मेदिना सिडोनियाको छेउमा, लास कोभाचस वा टिन्डस डे सिएरप्स थिए पुरानो व्यापारी बजार। चिह्नित गोथिक शैलीको साथ, तिनीहरू १ the औं शताब्दीको अन्तमा मेडिना सिडोनियाको द्वितीय ड्यूक, एन्रिक पेरेज डे गुजमेन वा मेनेसेसले निर्माण गर्ने आदेश दिएका थिए जुन त्यस समयमा, यो Sanlúcar को व्यावसायिक गतिविधि को एक ठूलो हिस्सा सँगै ल्याए। यस भवनले यसको ठूलो गहराईहरू र ड्र्यागनको आरामले सजाइएको एक सुन्दर फ्रिजको लागि ध्यान आकर्षण गर्दछ।
ला मर्सेडको अडिटोरियम
यो १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो र यो कन्भेन्टको रूपमा प्रयोग भयो र पछि हर्मेटेजको रूपमा। सहरका अधिकांश ऐतिहासिक भवनहरू र स्मारकहरू जस्तै ला मर्सेडको अडिटोरियम पनि हो यो मेदिना सिडोनियाको महान घरको संरक्षणको लागि बनेको थियो।
१ 80 .० को दशकमा, पुरानो कन्भेन्ट बिग्रिएको अवस्थाको उन्नत अवस्थामा थियो। यसैले, मेदिना सिडोनियाको XXI डचेसले Sanl thecar सिटी काउन्सिललाई ठाउँ दिने निर्णय गरे र हाल एक नगरपालिका सभागार र नगर परिषद्को प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख कार्यालय को रूप मा काम गर्दछ र Sanlúcar अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव।
चैरिटी अवर लेडीको बेसिलिका
बेसीलिका अफ अवर लेडी अफ चेरिटीलाई मेडिना सिडोनियाको VII ड्यूकले निर्माण गर्ने आदेश दिइयो। यो काम १ 1609० to देखि १ 1613१ The सम्म चलेको थियो। मन्दिरलाई महान घरले सिधा नियुक्त गरेको पादरी द्वारा नियन्त्रण गरिएको थियो।
यस आयोगलाई कासा डि मेदिना सिडोनियाका वरिष्ठ वास्तुविद् एलोन्सो डे भान्डेलवीरालाई सुम्पियो, जसले स्पष्ट शैलीको शैलीले अभयारण्यलाई सम्पन्न गर्‍यो। चर्चको बाहिरी भाग शान्त छ र सुन्दर घण्टा टावरलाई हाइलाइट गर्दछ जुन बाहिरको मुकुट गर्दछ। भित्र, लगभग समतल गुम्बजले प्रकाशलाई प्वालबाट भित्र जान दिन्छ जुन माथिको अवस्थित रहेको छ, मुख्य वेदीलाई उज्यालो बनाउँदछ।
रोटाको ढोका यो पुरानो शहरको प्रवेशद्वार मध्ये एक थियो, Guzmán el Bueno द्वारा घेरिएको। यो यसको नाम owणी छ भित्तामा त्यस बिन्दुमा, त्यो मार्ग जुन सान्ताकार डे बरमेडालाई रोटसँग जोड्दछएक, छिमेकी गाउँ। Sanlúcar मा यसलाई चिनिन्छ "अर्क्विलो" र यसको निर्माण १ dates औं देखि १ XNUMX औं शताब्दीसम्मको छ।
ओ पेरिस को हाम्रो महिला
ओ ओ लेडी को हाम्रो पैरिश यो Sanlúcar डे बरमामेडा को ग्रेटर चर्च हो। यसको निर्माण १ 1603०XNUMX को हो र मेडिनासेलीको पहिलो डचेस, इजाबेल डे ला सेर्दा वा गुज्मनको संरक्षणको लागि धन्यवाद गरिएको थियो, जो गुज्मन एल बुएनोको नातिनी पनि थिइन।
मुडेजर शैली र आयताकार बोटबिरुवाले बनाएको यस मन्दिरमा यसको बलौटे ढु .्गाका मूर्तिहरू छन् जसलाई गुज्मन र डे ला सर्डाका भव्य घरहरूको हूलको आकृतिले समृद्ध बनाएको छ। भित्र, मुडेजर coffered छत सबै आँखा समात्छ।
मेदिना सिडोनिया प्यालेस
मेदिना सिडोनियाको ड्युक्सको दरबार यो १th औं शताब्दीमा १२ औं शताब्दीको मुस्लिम दंगामा निर्माण गरिएको थियो। दरबारमा विभिन्न वास्तुशिल्पहरू सँगै हुन्छन्, पुरानो निर्माणको मुडेजर शैली, र रेनेसान्स को प्रमुखता दिँदै। भित्री घर द्वारा अधिग्रहण गरिएको आर्टिभरीको कार्यले भित्री भाग भरिएको छ। Zurbarán र फ्रान्सिस्को डे गोया को कद को कलाकारहरु को चित्रहरु बाहिर खडा। बगैचामा 5000००० मिटरको वन छ2 र यो भवनको अर्को उत्कृष्ट गहना हो।
आज, दरबार गैर नाफा नकमाउने संस्था फंडासिन कासा मेदिना सिडोनिया र को मुख्यालय हो यो Sanlúcar डे बरमामेडा मा एक सबैभन्दा प्रतिनिधि र प्रामाणिक होस्टल को घर छ।
राजदरबार १ th औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो गर्मी निवास मोन्टपेंसीयरको ड्यूक्स को, एन्टोनियो डी ओर्लिन्स र मारिया लुइसा फर्नान्डा डि बोर्ब्न। आज छ शहरको सब भन्दा प्रतिष्ठित भवनहरु मध्ये एक, Sanlúcar de Barrameda को शहर को रूप मा कार्य गर्दै।
यसको वास्तु शैली र यसको सुन्दर बगैंचाहरूले यसलाई बनाउँदछ कला को एक अद्वितीय काम, नियो-मुडेजर शैली एफएड इन्टिरियलको क्लासिकिज्मसँग विरोधाभास छ जुन भित्री केही क्षेत्रहरूमा अवस्थित छ। दरबन्दी, मिश्री वा चिनियाँ जस्ता शैलीहरू दरबारको अन्य कोठामा अवस्थित छन्।
कासा दि मेदिना सिडोनियाको संरक्षणमा १ the औं शताब्दीमा निर्मित, कास्टिलो डे स्यान्टियागो यसको ढिलो गोथिक शैली र क्यापको लागि, टारिफाको महलको टोरे डी गुज्मन एल बुएनोको प्रतिकृति हो। यस जटिलले एउटा डुकल किल्लाको रूपमा काम गर्‍यो र महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू भेट्न आए जो सान्लाकरमा यसको सुविधायुक्त स्थानको कारण रोकेका थिए, जस्तै कोलान, फर्नान्डो डे म्याग्लानेस र आफैंमा इसाबेल ला काटेलिका।
कास्टिलो डे स्यान्टियागो निस्सन्देह ती शहरहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले शहरमा देख्नु पर्दछ। हाल भित्र घरहरू पोशाक संग्रहालय र हतियार संग्रहालयदुबैको पहुँच गढीको लागि सामान्य प्रवेश टिकटको साथ सम्मिलित छ। थप रूपमा, यससँग असंख्य बगैंचा र कोठाहरू छन् जुन सबै प्रकारका उत्सवहरू होस्ट गर्नका लागि प्रस्ताव छन्।
Sanlúcar de Barrameda मा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटहरू
सानलकर एक शहर हो जसले यति धेरै योजनाहरू र संभावनाहरू प्रदान गर्दछ कि तटीय क्षेत्रको बावजुद, यो जाडोमा पनि भ्रमण गर्न लायक छ। यद्यपि यदि तपाइँ गर्मीमा शहर मा जानुहुन्छ र दक्षिणी गर्मी बाट बच्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाई सान्ल्याकार डे बरमेडामा उत्तम समुद्री तटहरू मा जान सक्नुहुनेछ।, सूर्यको आनन्द लिनुहोस् र राम्रो स्नानको साथ शीतल हुनुहोस्।
ग्वाडल्किभिरको मुखमा अवस्थित यो समुद्री तट स्थानीयहरूका लागि धेरै लोकप्रिय छ र उत्सुकताका साथ बाहिरी व्यक्तिहरू भने थोरै आउँदछन्। यो छ एक धेरै प्रामाणिक समुद्र तट, शान्त, स्पष्ट बालुवा र धेरै शान्त पानीको साथ। किनार नजिक, तपाईं साना डु boats्गा देख्नुहुनेछ, स्थानीय मछुवाहरू द्वारा स्वामित्वमा। यद्यपि यो नुहाउनको लागि उत्तम समुद्र तट होईन, यो हिड्नको लागि उत्तम हो, समुद्री किनारमा पियाएर र समुद्री बतासको आनन्द लिनुहोस्।
ला Calzada र लस Pilatas को तटहरू
दुबै समुद्री तटहरू, एक अर्काको छेउमा अवस्थित रहेका छन्, सायद स्यानलकारमा राम्ररी परिचित छन्। प्रसिद्ध घोडा दौड यहाँ अगस्त मा आयोजित छन्शहरको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण परम्परा मध्ये एक हो।
यी समुद्री किनारहरुको पेशाको स्तर प्राय: उच्च हुन्छ, तर यो तिनीहरूमा जान लायक छ, विशेष गरी यदि तपाईं सबै प्रकारका सुविधाहरू र सुविधाहरूको फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने, जब तपाईं दृश्यहरुमा रमाउनुहुन्छ।
यदि तपाईं शहरको हंगामाबाट टाढिन खोज्दै हुनुहुन्छ र दिनलाई अझ असम्भव वातावरणमा बिताउनुहुन्छ भने, Playa de la Jara तपाईंलाई मोहित पार्नेछ। Sanlúcar de Barrameda को बीचबाट करीव १ minutes मिनेट अवस्थित, यो समुद्र तट राम्रो स्नानको आनन्द लिन, बिच्छेदन गर्न र प्रकृतिको साथ सम्पर्कमा रहनको लागि आदर्श हो।
यद्यपि यसमा धेरै सेवाहरू र सुविधाहरू छैनन्, परिदृश्यको सौन्दर्यले यसको लागि बनाउछ। त्यहाँ प्राय: धेरै व्यक्ति हुँदैन, त्यसैले शान्ति ग्यारेन्टी गरिएको छ, र बालुवामा आराम गरेको सूर्यास्त हेर्नु वास्तविक तमाशा हो। अवश्य पनि, यदि तपाईं यस समुद्री तटमा जानुहुन्छ भने म तपाईंलाई बुटिज लगाउन सिफारिस गर्दछु, त्यहाँ चट्टानहरू छन् र यस प्रकारको फुटवेयरले तपाईंको बाथरूमलाई बिगार्न मद्दत गर्दछ।
प्लाजा डेल क्याबिल्डो
प्लाजा डेल क्याबिल्डो सानलिकर डे बरमेडाको मुटु हो, यसको चारैतिर बार, टेरेस र रेष्टुरेन्टहरू वितरित हुन्छन् र वातावरणको ठूलो अंश केन्द्रित हुन्छ। केन्द्रीय फव्वारा र ठूला ताडको रूखहरू जुन वर्गको भित्र पस्छन्, यसलाई एक अद्वितीय स्थान बनाउँदछ र कुनै श doubt्का बिना क्षेत्रको सबैभन्दा प्रतीकात्मक।
यो जीवन भरिएको छ र यदि तपाईं तपसको संस्कृति जान्न चाहानुहुन्छ भने, यो स्थानका लागि यही स्थान हो। मिठो दाँत भएकाले यहाँ आफ्नो उत्तम योजना फेला पार्न सक्दछन्, किनकि स्थानीय वरपरका चारैतिर त्यहाँ स्यानल्याकर डे बरमेडामा केहि राम्रा आइसक्रिम पार्लरहरू छन्।
धेरै अन्य तटीय शहरहरूमा जस्तै, माछा मार्ने काम Sanlúcar de Barrameda को सब भन्दा पुरानो र सबै भन्दा सान्दर्भिक गतिविधि हो। माछाको व्यापार थाहा पाउनु नै सान्लुकन संस्कृतिलाई पुग्ने राम्रो तरिका हो। यसमा जानु भन्दा राम्रो केही छैन Bonanza बजार।
बन्दरगाहको छेउमा अवस्थित, माछा बजार शहरको माछा मार्ने व्यवसायको केन्द्रबिन्दु हो। यो दुई क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिएको छ, एउटा पर्स सीन माछाको बिक्रीमा समर्पित छ र अर्को ट्रोलिंगमा। माछा लिलामी, कुनै श doubt्का बिना, सबै भन्दा प्रामाणिक प्रदर्शन हो जुन तपाईं Sanlúcar आफ्नो यात्राको दौरान साक्षी दिन सक्नुहुन्छ। यो फिशमोनगरहरू र स्थानीय व्यवसायहरू द्वारा भाग लिन्छन् जुन उत्तम ताजा उत्पादनको लागि बिड हुन्छ। यदि तपाईं शहरको सार पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पनि सक्नुहुन्छ डकमा माछा मार्नुहोस् माछा अनलोडिंग हेर्नका लागि।
Sanlúcar बाट डोआना नेशनल पार्क भ्रमण गर्नुहोस्
डोआना नेशनल पार्क यो स्पेनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। यो रिजर्भ एक ठूलो विविध प्रकारको इकोसिस्टमबाट बनेको छ जसले यसलाई विविधता र समृद्ध परिदृश्यको साथ प्रदान गर्छ जुन यूरोपमा अद्वितीय छ। Sanlúcar de Barrameda भाग्यशाली हो पार्क मा धेरै नजिकै अवस्थित रहेको र डोआना भ्रमण भ्रमण शहर बाट आयोजित गरीन्छ। यदि तपाईं स्मारकहरू भन्दा बढि केहि हेर्न चाहानुहुन्छ र तपाईं सबैभन्दा अनसोल्ड प्रकृतिबाट आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, यी भ्रमणहरूमध्ये एउटा बुकिंग एक राम्रो विचार हो।
पार्क डु boat्गाबाट गुवादाल्विर हुँदै पहुँच गरिन्छ र, यद्यपि नदीको पैदल हिँडाई पहिले नै अद्भुत छ, यदि तपाईं डोआनाका सबै इकोसिस्टमहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं एक अखिल इलाका सेवा पनि भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ, जसमा सामान्यतया एक विशेष गाइड समावेश हुन्छ, जससँग तपाईं यस प्राकृतिक प्रत्येक कुनामा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। खजाना।
डु boats्गा बाजो दि गुवा समुद्री तटबाट छुट्छन् र ग्वाडल्किभिर पार गरेर प्रकृति रिजर्भको किनारमा जान्छन्। त्यहाँ एक पटक, se सबै इलाकाको सवारी साधनमा जारी राख्नुहोस् र डोआानाको सबैभन्दा प्रभावशाली परिदृश्य हुँदै यात्रा सुरु गर्नुहोस्: समुद्री तटहरू, सेतो बालुवा टिब्बा, संरक्षण, दलदलहरू ... मार्ग ends La Plancha at मा समाप्त हुन्छ, एक पुरानो शहर जहाँ एकपटक पार्कमा बसोबास गर्नेहरू बस्ने गर्थे।
डु boat्गाले तपाईंलाई Sanlúcar मा फिर्ता पठाउने छ, ताकि तपाईं शहरमा रमाईलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए अब तपाईलाई थाहा छ, यदि तपाईलाई Sanlúcar de Barrameda मा के हेर्ने थाहा छैन भने, दिमागमा राख्नुहोस् कि एउटा विकल्प यसको वरपरको अन्वेषण गर्नु हो र तपाईं केवल एक दिनमा यो भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ।
Sanlúcar मा फ्लेमेन्को
फ्लेमेन्को अन्डालुसियाको एक सबैभन्दा प्रतिनिधि सांस्कृतिक तत्व हो। यद्यपि त्यहाँ शहरहरू छन् जहाँ यस संगीत शैली को लागी माया सबै कुनामा छ, Sanlúcar de Barrameda ती शहरहरू मध्ये एक हो।
गीत र नाचको आनन्द लिन, Sanlúcar मा त्यहाँ प्रसारण र यी भूमि को कला प्रदर्शन मा विशेषज्ञ स्थानीय छन्। यदि तपाईं सान्लाकरको संस्कृतिसँग नजिक हुन चाहानुहुन्छ भने तपाई कुनै पनासको भ्रमण नगरीकन छाड्न सक्नुहुन्न र अझै लाइफहरू छन् जुन यस प्रकारको कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दछ (र जसको बारेमा म तल जानकारी दिन्छु)।
Sanlúcar de Barrameda मा म flamanco शो कहाँ देख्न सक्छु?
स्थिर जीवन गर्न को लागी
Calle सैन मिगुएल मा स्थित छ, पलाइस d'Orléans बाट मात्र तीन मिनेट पैदल, यो परम्परागत मधुमेह र तबलाओको मिक्स पर्यटकले अद्वितीय फ्ल्यामेन्को कार्यक्रमको मजा लिने अवसर प्रदान गर्दछ व्यावसायिक कलाकारहरु, क्षेत्र को विशिष्ट व्यंजन चख्ने बेला।
फ्लेमेन्को क्लब प्यूर्टो लुसेरो
Calti de la Zorra मा कास्टिलो डे स्यान्टियागोबाट करीव meters०० मिटर, पेना फ्लामेन्का पियर्टो लुसेरो छ यो नाफा नकमाउने सांस्कृतिक संघ फ्लेमेन्को कार्यक्रम आयोजना गर्दछ। क्षेत्रबाट कलाकारहरू ल्याएर र युवा प्रतिभालाई मद्दत गर्दै, पेनाले फ्लेमेन्को स्यानकारको एक जीवित सम्पदा हो भनेर देखाउन प्रयास गर्दछ र तिनीहरू यस कलाप्रतिको प्रेम सबैको लागि प्रसारित गर्न को लागी प्रयास गर्छन् जो उनीहरूको तबलाउ आउँदछन्।
Rociera एल रेन्गु कोठा
तपस, पेय र लाइभ संगीत, साला रोसियरा एल रेनगु सान्लाकरमा रमाइलो गर्न चाहनेहरूको लागि आदर्श स्थान हो। बरम्मेडा देखि रूम्बास र सेभिलानासको ताल सम्म। Calle de Las Cruces मा अवस्थित, स्थानले आरामदायी वातावरण प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई प्रामाणिक र फरक तरीकाले फ्लेमेन्कोको नजिक जान अनुमति दिनेछ।
वाइन उत्पादन, ऐतिहासिक रूपमा, Sanlúcar डे बरमामेडा को लागी एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि हो। यद्यपि त्यहाँ वाइनरीहरू छन् जसले उत्पत्तिको विभिन्न सम्प्रदाय (जेरेज, भिनाग्रे र ब्राण्डी डि जेरेज) बाट मदिरा बेच्छ, मन्जिला एक हो जुन परम्परागत रूपमा स्यानकारको संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ।
Es संसारमा सबैभन्दा विशेष वाइन मध्ये एक, यो एक अद्वितीय चरित्र छ र यो यो जन्म भएको ठाउँमा यो यस्तो विशेष बारीक प्रदान गर्दछ। यो छ अपरिटिफ सँगसँगै आउन, यो चिसो खाईन्छ (ºº र between डिग्री सेल्सियस बीच) र जोडी धेरै राम्रोसँग समुद्रबाट आउने सबै खाद्य पदार्थहरूसँग र भाग्यवस, स्यानकारले एक धेरै राम्रो कच्चा माल, ताजा र शीर्ष गुणस्तरका उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ।
म पक्का छु कि मैले पहिले नै तपाईंलाई गिलासको क्यामोमाइल प्रयोग गर्नका लागि विश्वस्त तुल्याएको छु, तर ... के तपाई यसलाई जान्न चाहानुहुन्न? शहरमा केहि दिन बिताउन आउने वाइन प्रेमीहरूको लागि वाइन टुरिजम उत्तम विकल्प हो। त्यहाँ वाइनरीहरू छन् जुन पर्यटकहरूको लागि भ्रमणहरू आयोजना गर्दछन् र जसमा उनीहरूले सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियाको व्याख्या गर्छन् Sanlúcar को प्रतीक भएको छ कि पेय को।
केहि वाइनरीहरू जसले उनीहरूको सुविधाहरूमा भ्रमणहरू व्यवस्थित गर्छन्
बोडेगास हिडाल्गो ला गिताना
1972 मा स्थापित, बोडेगास हिडाल्गो ला गिताना एक परम्परागत व्यवसाय हो जुन बुबाबाट छोरामा पारित गरिएको छ। उनीहरूको स्टार उत्पादको लागि उनीहरूको ख्याति छ: "ला गीताना" मन्जिला, सान्लाकार दे बरमेडामा सबैभन्दा परिचित एक।
संगठित गर्नुहोस् दैनिक स्वाद र निर्देशित टूरहरूको विभिन्न प्रकारहरू। आरक्षण उनीहरूको वेबसाइटबाट गर्न सकिन्छ र मूल्यहरु एकदम उचित छ।
बोडेगास ला सिगारारेरा
मञ्जानिला «La Cigarrera about को बारेमा कुरा गर्नु परम्पराको पर्यायवाची हो। वाइनरीको उत्पत्ति एक क्याटालान व्यापारीलाई दिइन्छ जसले सान्ल्याकार श्री जोसेफ कोलम दरबीमा बसेका थिए र जसले १ 1758 the the मा Callejól Del Truco मा एक स्थानीय ठाउँमा वाइन सेलर स्थापना गरे।
आज, २०० भन्दा बढी बर्ष पछि, व्यापार बढेको छ C La Cigarrera the एक धेरै व्यावसायीकृत Manzanillas को एक। ला मन्जनिलाको संस्कृतिलाई सर्वसाधारणको नजीक ल्याउन र परम्परा र सान्लुकन इतिहासप्रति प्रेम सार्नका लागि वाइनरीका मालिकहरूले यसलाई सार्वजनिकमा खोल्ने निर्णय गरे सुविधाहरूको गाईड टूर्स र यसमा समावेश ए तिनीहरूको सबै भन्दा राम्रो वाइनको स्वाद लिदै. आरक्षण उनीहरूको वेबसाइटमा प्रस्ताव गरिएको सम्पर्कबाट बनाउन सकिन्छ।
१1821१२ मा खोलिएको, बोडेगास बार्बाडिलोले सुविधा र टेस्टिंगको मार्गनिर्देशन भ्रमण मात्र प्रस्तुत गर्दैन, तिनीहरूसँग Sanlúcar मा Manzanilla को इतिहास र उत्पादन को समर्पित एक संग्रहालय छ। ब्यारेल बीच, तिनीहरूले तपाइँलाई "जीवनशैली" को रूपमा परिभाषित गरेको प्रेमको प्रसारण गर्नेछन् र तपाइँलाई क्षेत्रको संस्कृतिको नजिक ल्याउँनेछन्।
ला मन्जिलाल्ला सोलियर वाइनरीको सबै भन्दा राम्रो परिचित वाइन हो र यो परम्परागत Andalusian मेला को एक ठूलो हिस्सा ड्रेसिंग र एनिमेटेड को लागी प्रख्यात भएको छ।
कहाँ Sanlúcar डे Barrameda मा खानु
ग्यास्ट्रोनोमी क्षेत्रको अर्को ठूलो पर्यटन आकर्षण हो। Sanlúcar उत्तम समुद्री खाना उत्पादनहरू, प्रस्तुत गर्दैको लागि प्रसिद्ध भएको छ झींगा यसको स्टार उत्पाद। माछाको स्वाद, रक्सीको साथ बनाइएको राम्रोसँग बनेको तताउने र समुद्री खानाको आनन्द लिने, सान्लाकर ग्यास्ट्रोनोमीलाई काडिजको पाक परम्पराको प्रतिनिधि बनाउँदछन्।
त्यसोभए तपाईं Sanlúcar de Barrameda को राम्रो खानाको मजा लिनु बिना नै छाड्नुहुन्न, म निम्न केहि प्रस्तुत गर्दछु। शहरमा सर्वश्रेष्ठ रेटेड बारहरू र रेस्टुरेन्टहरू।
कासा बिगोटे भोजनालय
बाजो दि गुवामा अवस्थित यो रेस्टुरेन्ट १ 1951 XNUMX१ देखि खुला छ र ती ती स्थानहरूमा एक हो जुन परम्परा र उत्कृष्टताको प्रतीक हो। यसको ग्यास्ट्रोनोमिक प्रस्ताव स्थानीय उत्पादन, समुद्री खाना र उच्च गुणस्तरको ताजा माछामा आधारित छ, राम्रोसँग पकाइएको छ र एक अनौठो वातावरणमा।
बार कासा बालबिनो
के एक किराना स्टोर को रूप मा शुरू, आज Sanlúcar डे Barrameda मा एक सन्दर्भ पट्टी हो। तिनीहरूको भान्सामा तयार पारिएका उत्कृष्ट झिंगे ओमलेट्सले स्थानीय र विदेशीहरूको पेट जितेको छ। उत्पादनको लागि सम्मान र क्षेत्रको विशिष्ट खाना भनेको स्तम्भहरू हुन् जसले यसको उत्कृष्ट ग्यास्ट्रोनोमिक प्रस्ताव र यसको सफलतालाई कायम गर्दछ।
यदि तपाईं प्रामाणिक मन पराउनेहरू मध्ये एक हो भने, यो ठाउँ तपाईंलाई मोहित गर्नेछ। केन्द्रको हलचलबाट टाढा यस मधुशाला भनेको खास जुन स्थानीयहरू जान्छन्। मेरो विचारमा, Rincón Bético ले शहरमा सब भन्दा राम्रो फ्राइड माछा, ताजा, चिसो र ठूलो मूल्यमा प्रदान गर्दछ। सम्पूर्ण फ्राइड कटलफिश यसको स्टार डिश हो, अन्य प्रतिष्ठानहरूमा भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » Sanlúcar de Barrameda मा के हेर्ने
इजिप्टमा लक्सरको मन्दिर